အဲဗစ်ပရက်စလေရဲ့ မြေးနဲ့အတူ သည်းထိတ်ရင်ဖို မှုခင်းရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်မယ့် မင်းသမီး အလီဆီယာ ဗီ? - Yangon Media Group
အဲဗစ်ပရက်စလေရဲ့ မြေးနဲ့အတူ သည်းထိတ်ရင်ဖို မှုခင်းရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်မယ့် မင်းသမီး အလီဆီယာ ဗီ?
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ မတ် ၂၃
မင်းသမီး အလီဆီယာဗီကန်ဒါနှင့် ကွယ်လွန်သူအဆိုတော်ကြီး အဲဗစ်ပရက်စလေ၏ မြေးဖြစ်သူ ရီလေကို့ခ်ျတို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဇာတ်အိမ်တည်မည့် ‘The Earthquake Bird’ အမည်ရှိ သည်းထိတ်ရင်ဖို ရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ‘Tomb Raider’ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အလီဆီယာနှင့် ရီလေတို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဇာတ်အိမ်တည်ထားသော စာရေးဆရာ Susanna Jones ၏ ဝတ္ထုကို မှီ ငြမ်းထားသော သည်းထိတ်ရင်ဖို ရုပ်ရှင်တွင် သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး ဖြစ်သည့် လူစီနှင့် လီလီအဖြစ် ပါဝင်ရန် သဘောတူထားပြီး ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
‘The Earthquake Bird’ ရုပ်ရှင်တွင် သူငယ်ချင်းဟောင်းလီလီကို သတ် ဖြတ်မှုကြောင့် တိုကျိုရဲတပ်ဖွဲ့က လူစီကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ လူစီ၏ ဂျပန်လူမျိုး ဓာတ်ပုံဆရာချစ်သူနှင့် ၎င်းတို့သူ ငယ်ချင်း နှစ်ဦးကြားမှ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူ လီလီပျောက် ဆုံးမှုကို ဖော်ထုတ်ရေး ကြိုးပမ်းပုံကို ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။ အဓိက သရုပ် ဆောင်မင်းသားကို ရွေးချယ်ရခြင်း မရှိ သေးကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ကို ‘Still Alice’ ရုပ်ရှင်အား ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဒါရိုက်တာ ဝက်ရ်ှဝက်စ်မိုးလ်လန်းက ဇာတ်ညွှန်းရေးသား ရိုက်ကူးမည်ဖြစ်သည်။ ဝတ္ထုစာအုပ်တွင် ဇာတ်အိမ်တည်ထားသည့်အချိန်၌ ၎င်းက ဂျပန်နိုင်ငံတွင် စာသင်နေခဲ့ချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည့်အတွက် ယင်း ဒါရိုက်တာက ချိတ်ဆက်ရိုက်ကူးခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။ ရိုက်ကူးရေးကို လာမည့် မေလတွင် တိုကျိုနှင့် ဆာဒိုကျွန်းတို့တွင် စတင်မည်ဟု သိရသည်။
အတိတ်ရန်ငြိုး မျက်မုန်းရယ်မပြေ Seven Years of Night ရုပ်ရှင်
မုံရွာမြို့ နန္ဒဝန်အိမ်ရာ စီမံကိန်းမှ အခန်းပေါင်း ၆ဝဝ ကျော်ကို နှစ်ရှည် အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရော